WALQO: Farra hiyyummaa, abdii gaafa rakkoo
Waldaan Aksiyoona Liqiifi Qusannaa Oromiyaa (WALQO) tajaajila maaykiroo faayinaansii hiyyummaa xiqeessuurratti fuulleffate dhiheessuun jiruufi jireenya ummatichaa fooyyeessuuf sochii cimaairratti argama.Tajaajila…
Raabsa sanyii filatamaa milkaa'aa jiraachuun himameef
Hordoffiin raabsaa sanyii filatamaarratti taasifamu komii dhiyeessii wajjin walqabatee ka’aa ture qisuusaa ragaan Ejensii Tiraanisfoormeeshinii Qonnnaa Itoophiyaarraa argame ni mul’isa.…
Galii jiddugaleessaa argachuuf malaammaltummaarratti qabsaa'uu
Gochoota guddina dinagdee biyyoota guddataa jiranii keessumaa kan ardii Afrikaa xaxanii qaban keessaa tokko malaammaltummaadha. Hooggantoonni biyyoota ardittii dabareedhaan walfuranii…
Hojiin qonnaa tibba gannaa bu'uura dinagdee bonaati
Duula gannaa, duula tola ooltummaa, yeroo boqonnaa barattootaa, yeroo walgaaffii firoottan walirraa fagaatanii turanii, yeroo sanyiin itti bahu, dacheen magariistu,…
Warshaa simintoo Mugar rakkoo ummataaf birmatee, ummannis tikfate
“Warshicha kan ilaallu akka qabeenya dhuunfaatti malee akka qaama biraatti miti. Kana waan ta'eef akkuma qabeenya keenyaatti kunuunsina. Waggoota sadeen…
Maallaqni keenya daangaa yeroo fayyadamaa qabaachuu qaba
Maallaqni biyyoota tokko tokkoo kanneen akka Ameerikaafaa daangaa yeroo ittifayyadamaa akka qabutu ibsama. Sirni to'annoo maallaqasaaniin daran cimaa akka ta'eedha…
Bajanni ramadame qisaasama tokko malee faayidaa ummataatiif ooluu qaba
Mootummaan Naannoo Oromiyaa fedhii misoomaa ummataa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe sadarkaa sadarkaan guutuuf bajata ramadu qisaasama tokko malee fedhiifi…
Itoophiyaafi Buufata Asab
Gaggeessitootni Itoophiyaafi Eertiraa waggoota 20 booda waldhabiinsa gidduusaanii ture hiikuun waliigalteerra gahuunsaanii kan beekamuudha. Waliigaltee taasisan keessaas misooma hawaas-dinagdee biyyoota…
Biyya qonnaan jiraannu taanee qamadii alaa bituun maaliif?
Omishaafi omishtummaa qonnaa guddisuuf mala qonna ammayyaatti fayyadamuun dirqama yeroon gaafatuudha Qonni bu'uura guddina dinagee Itoophiyaati. Omishaafi omishtummaan damee kana…
Abdii boba'aan guddina dinagdee keessatti qabu
Guddina dinagdee addunyaa har'aa keessatti boba'aan qooda olaanaa qaba. Itoophiyaan waggota dheeraaf biyya boba'aa hinqabne jedhamtee turtus, akka ragaaleen mul'isanitti,…
Raafamni dinagdee tarkaanfii dabalataa fedha
Waggoota kurnan darbaniif dinagdeen biyyattii giddugaleessaan dhibbantaa 10.1n guddachaa turuusaa mootummaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuunsaa kan yaadatamudha. Jijjiiramni gama hawaas-dinagdee,…
Foramii magaalota Oromiyaa kalaqoonni addaa irratti mul’atan Foramiin magaalota Oromiyaa barana yeroo jalqabaatiif Magaalaa Jimmaatti kabajame miira tokkummaa Oromoo ijaaruurra…
“Waggoota sadan dhufan keessatti waan hin yaadamnetu ta'a” -Luba Bal'inaa Saarkaa
Luba Bal'inaa Saarkaa Godina Wallaggaa Lixaa, Aanaa Boojji Dirmajjii, Amuumaa Heennaatti bara 1934 dhalatan. Barumsasaanii sadarkaa tokkoffaa kutaa 1-7fatti Mana…
Torban kana/This_Week 7722
Guyyaa mara/All_Days 1817142